Barzagli oo tilmaamay in imatinka Ronaldo ay kooxda Juventus ka dhigtay mid ka awood badan xili ciyaareedkii hore – Gool FM
Barzagli oo tilmaamay in imatinka Ronaldo ay kooxda Juventus ka dhigtay mid ka awood badan xili ciyaareedkii hore
(Juventus) 05 Sab 2018. Andrea Barzagli ayaa dareen farxad leh ka muujiyay imaatinka Juventus ee laacibkii hore kooxda Rea Madrid Cristiano Ronaldo suuqii xagaaga ee lasoo dhaafay.
Juventus ayaa kula soo wareegtay saxiixa Cristiano Ronaldo aduun dhan 100 million euro, waxayna Bianconeri dooneysaa sanadkan in ay si xoogan ugu dagaalanto ku guuleysiga tartanka UEFA Champions League.
laakiin difaaca kooxda Juventus Andrea Barzagli ayaa sheegay in goolal la’aanta laacibka reer Portugal ka heysata kooxdiisa cusub aysan wax dhibaato ah ku qabin isla markaana ay ku faraxsan yihiin imaatinkiisa.
“Ma jiraan wax dhibaato ah ee aan ku qabno goolal la’aanta Cristiano Ronaldo ee kooxda Juventus, laakiin waa arin aad u wanaagsan inuu qeyb nagula yahay tababarka”.
“Cristiano Ronaldo wuxuu sida ugu dhaqsida goolal ugu dhalin doonaa kooxda Juventus, kadib markii uu nagu soo biiray Bianconeri waxaan ka awood badanahay sida xili ciyaareedkii hore”.
"Kuwa ka maseyrsan Modric, hala dhintaan maseyrkooda”… Rakitić oo u jawaab celiyay wakiilka Cristiano Ronaldo
Mid kamid ah xiddigaha kooxda PSG oo ka caraysiiyay Nasser Al-Khelaifi